Sayonara Player: Ọsọ ọsọ ọsọ na nke dị fechaa nwere ọtụtụ atụmatụ | Site na Linux
Sayonara Player: Onye na-egwu ọsọ ọsọ ma dịkwa fechaa nwere ọtụtụ atụmatụ
Taa enwere m ohere ịnwale ọzọ ngwa na ọkụ player, bụ na ndepụta ahụ enweghị njedebe ma ọ dị ka oge ọ bụla ị nwaa ngwa ọhụrụ, ị ga-ewepụ ụzọ ole na ole site na ịnwale nke ka mma,ọ dị mma maka ụdị ngwa dị iche iche!.
Oge a ka m zutere Egwuregwu Sayonara, Ọ bụghị na-eto eto mgbe niile n'ihi na ọ bụ ugbua na mbipute 0.9.2, n'agbanyeghị ya ihe karịrị afọ 3 nke ịdị adị, ọ bụ oge mbụ ọ ruru aka m na m ụtọ a otutu akafiakde ese, otú ìhè, ngwa ngwa na atụmatụ na a player ya mere obere.
1 Gịnị bụ Sayonara Player?
2 Sayonara Player Njirimara
3 Olee otú iji wụnye Sayonara Player?
3.1 Wụnye Sayonara Player na Ubuntu / Debian na nkwekọrịta
3.2 Wụnye Sayonara Player na Fedora na nkwekọrịta
3.3 Wụnye Sayonara Player na Arch Linux na nkwekọrịta
4 Mkpebi banyere Sayonara Player
Gịnị bụ Sayonara Player?
Ọ bụ ngwa ngwa dị egwu ma dịkwa fechaa, edere na C ++ nke Qt na-akwado ya ma chọta naanị maka Linux. Ngwaọrụ a pụtara maka iji Gstreamer dị ka ọdịyo ọdịyo yana maka inwe ọtụtụ atụmatụ juputara na obere ngwa ọrụ.
Otu ebumnuche Sayonara bụ iji rụọ ọrụ nke ukwuu, si otú a mepụta ngwa ọrụ na-enweghị nghọta ma dịkwa mfe iji. Ihe a niile na-esonyere usoro mmepe, nke gosipụtara nchegbu ya maka arụmọrụ dị elu, obere CPU na oriri nchekwa.
Sayonara Player Njirimara
Nkwado maka ọtụtụ ọdịyo na usoro ọkpụkpọ.
Ezigbo njikwa nke ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ, na ọrụ ọchụchọ dị elu.
Nkwado maka ngwaọrụ mpụga.
Nzukọ sara mbara nke egwu.
Boardzọ mkpirisi keyboard.
Nkwado maka Last.FM, Soundcloud, Soma.fm, Pọdkastị, Onye na-edekọ iyi, Mgbasaozi Redio na ọtụtụ ndị ọzọ.
Otú ha si ekwu na ịhụnanya na-abanye n'anya, ya mere, lee ọtụtụ njide nke onye ọkpụkpọ ahụ:
Olee otú iji wụnye Sayonara Player?
Ndị ọrụ gọọmentị Sayonara Player na-enye anyị ọtụtụ ozi gbasara ọtụtụ ụzọ iji wụnye onye ọkpụkpọ a, ị nwere ike ịnweta ya Ebe a.
Nwere ike iwunye ụdị kachasị ọhụrụ site na nchịkọta gọọmentị, site na ịme iwu ndị a:
$ git clone -b nna ukwu https://git.sayonara-player.com/sayonara.git sayonara-player $ mkdir -p wuo && cd wuo $ cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX = / usr -DCMAKE_BUILD_TYPE = "Hapụ" $ mee $ wụnye (dị ka mgbọrọgwụ)
Gbaa mbọ hụ na ị wụnyere ọba akwụkwọ ndị a.
Gstreamer 1.0, Gstreamer isi plugins, Gstreamer ezigbo plugins,
Gstreamer plugins jọrọ njọ (nhọrọ)
N'otu ụzọ ahụ, maka ihe kacha mkpa distros anyị ga-ahapụ usoro iji mee ya.
Wụnye Sayonara Player na Ubuntu / Debian na nkwekọrịta
$ sudo apt-add-re-repository ppa: lucioc / sayonara $ sudo apt-nweta nwelite $ sudo apt-to install sayonara
Wụnye Sayonara Player na Fedora na nkwekọrịta
Wụnye Sayonara Player na Arch Linux na nkwekọrịta
Mkpebi banyere Sayonara Player
Egwuregwu Sayonara Echere m na ọ bụ otu n'ime ndị kachasị mma maka ndị anyị hụrụ ihe ndị dị mfe ma dị mfe iji (olee otu m ga-esi kwuo Fico, ndị anyị na-achọ mmalite Kiss (site na Bekee Mee Ka Ọ Dị Mfe, Nzuzu!: "Mee ka ọ dị mfe, nzuzu!").
Nke a ngwa ngwa na ìhè player. Ọ nwere ọtụtụ àgwà na-eme ka o kwesịrị ohere, ọ bụ ọtụtụ asụsụ, dị mfe ịwụnye, njirimara na ndakọrịta dị mkpa maka ebumnuche ya "na-ege egwu", ọ nwekwara njikọta na nyiwe dị iche iche, gụnyere ama ama Podcast na taa na-enye ọtụtụ ihe maka ikwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Sayonara Player: Onye na-egwu ọsọ ọsọ ma dịkwa fechaa nwere ọtụtụ atụmatụ
Anọ m na-eji ọkpụkpọ a ihe karịrị afọ abụọ ma eziokwu bụ na enwere m obi ụtọ na ya n'ihi na ọ na-achịkọta ihe niile m na-achọ. Na mgbakwunye, Lucio Carreras, onye bụ onye nrụpụta ya, na-anabata ozi ma na-aza ngwa ngwa na arịrịọ na ndozi anyị chọrọ na ihe ọkpụkpọ ahụ. N'oge ya edere m obere edemede na blọọgụ m gbasara ya:
Kakuren na-agwụ ike dijo
Daalụ maka ịkekọrịta, ọ bụ ezie na ọ masịrị m nke ukwuu. Nke a bụ nnukwu ihe ọzọ iji foobar2000 m na-achọ? Hahaha anagidere m na onye ọkpụkpọ ahụ na m ga-eji ya wineụọ mmanya mgbe m kwagara na Linux.
M nnọọ ebudatara ya na interface bụ phenomenal, nakwa dị ka ojiji na ọsọ. N'ihe banyere ọrụ ọ ka nwere ụfọdụ iji kwekọọ Clementine, mana ọ chọghị ọtụtụ ihe ịnọ na ọkwa ahụ, agbanyeghị na o nwere ihe niile ịchọrọ maka ọkpụkpọ egwu zuru oke, agbanyeghị na m na-emeghachi ya, n'ihe gbasara aesthetics na karịa Clementine. Aga m agbakwunye obefe n'etiti egwu ma melite ọchụchọ, nke ahụ ga-abụkwa ọkwa Clementine.
Zaghachi Abraham Rodriguez
emegheSUSE: Ngosi - SME Netwọk
Etu esi etinye KDE Plasma 5.8.5 LTS na Ubuntu na ndi ozo